2020, Sannad Waayahiisa iyo Wanaaggiisaba Watay! - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Dhacdooyin Cusub 2020, Sannad Waayahiisa iyo Wanaaggiisaba Watay!
2020, Sannad Waayahiisa iyo Wanaaggiisaba Watay!
Sannadka 2020 ee aan sagootinaynaa wuxuu watay waayihiisa gaarka ah. sannadkaas wuxuu lahaa waayo wada huwan culays iyo hal-abuurkii lagu furdaaminayay labadaba! Waayo saamayntooda ku yeeshay guud ahaanba hawlihii afka iyo dhaqanka, gaar ahaanna hawlaha Akadeemiye-Goboleedka.
Sannadkaas wuxuu Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga ugu astaysan yahay inay ku guulaystay furdaaminta iyo ka-dabbaalashada culayskii safmarka COVID-19, weliba hawlaha qaarkoodna ka tallaabsadeen dabarkii juqraafiga.Wuxuu kaloo ugu astaysan yahay bilaabidda dhismaha xarunta AGA ee muddaba la dhowrayay.
Sannadka 2020 wuxuu la curtay safmarka COVID-19, markii la gaaray bishii saddexaadna dunidii ayuu wada handaraabay. Waxaa la xayiray isu-socodkii iyo kulammadii bulshadu isugu iman jirtay. Waxaa hakaday kulammadii ay AkadeemiyeGoboleedku abaabuli jirtay. Waxaa loo qaatay in dhowr toddobaad gudahood hawluhu caadi ku soo noqon doonaan. Mase noqon!
Iyadoo lala jaanqaadayo dadaallada lagu xakamaynayo COVID-19, isla markaana laga faa`iidaysanayo tiknoloojiyada casriga ah iyo qalabka internetka, waxay noqotay in loo guuro kulammo ONLINE ah. Tusaale ahaan madashii AGA & kulammadii maamulkuba waxay u wada guureen ONLINE.
Laga soo bilaabo Juun 2020, waxay Akadeemiye-Goboleedku bilowday in “Madasha AGA ee Horumarinta Afka Hooyo iyo Hal-abuurkiisa” ay ku qabato hab ONLINE ah iyo aaladda ZOOM, si toos ahna loogu baahiyo Facebook TOOS (LIVE). Kulankii ugu horreeyayna wuxuu ka qayb noqday damaashaadkii toddobaadkii xorriyadda Soomaalida.
Habkan dantu qasabtay, wuxuu yeeshay faa`iido aad uga ballaaran intii la filayay. Soojeedinta iyo dhegaysigaba waxaa laga xoroobay dabarkii juqraafiga ee goobta lagu qabanayo madasha. Waxaa si joogto ah ugu xirmay barnaamijyada madasha kumanaan qof oo kala jooga dalalka Geeska Afrika iyo qurbajoogta ku faafsan daafaha dunida min Australia ilaa Canada.
Waxaa fursad loo helay inay soo jeediyaan xeeldheerayaal kala jooga dunida daafaheeda oo horraantii isu keeniddoodu adkayd. Waxaa si bille ah ONLINE ugu qabsoomay toddoba madallood, oo lagu falanqeeyay mawduucyo badiba la xiriira xaaladda adeegsiga AfSoomaaliga ee xilligan.
Madasha AGA waxay tusaale u tahay dhabaradeygga iyo hal-abuurnimada ay AkadeemiyeGoboleedku muujisay xilliga COVID-19. Madasha keliya maaha, waxaa iyana dhabarageyggaa ka mid ahaa joogtaynta hawlihii kale ee Akadeemiye-Goboleedku qabanaysay, sida joogtayntii warsidaha, dardargalintii dagalka (www.aga.so) iyo baraha hulshada, sida Facebook, Twitter & YouTube; adeegsigii warbaahinta kale ee wacyigalinta hiilka afka hooyo, tiro muxaadarooyin ah oo ardayda loo qabtay, iyo hawlo kale oo la qabtay, iyadoo uu jiro culayska COVI-19.
Hawlaha nashaadka ah ka sokow, 2020 wuxuu kaloo ku astaysan yahay sannadkuu bilowday dhismihii xarunta AGA ee dhowrka sannaba la sugayay.
Dhismaha xarunta AGA oo Muqdisho laga dhisayo waxaa la bilaabay 06/05/2020; waa 62 bilood ka dib markii hore loo dhagaxdhigay 21/2/2015. Dhismaha xaruntan waxaa ballan qaaday labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti, muddo ayay soo jiitamaysay, ugu dambayn waxaa dhabarka u ritay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Akadeemiye-Goboleedku waxay dhowrkii sanno ee tegayba ku shaqaynaysay xafiis kmg oo aan dabooli karin baahida barnaamijyada ay qabato, nooc ahaan iyo baaxad ahaan labadaba. Waxaan rajaynaynaa in dhismaha cusubi uu suurtagelin doono qabashada hawlo tiro iyo tayaba ka cuddoon inta maanta. Bilaabidda dhismahani farxad iyo raynrayn ayuu u yahay Akadeemiye-Goboleedka iyo guud ahaanba bahda afka iyo dhaqanka.
Bilasho wacan sannadka cusub ee 2021.
“kii noo hagaagoo noqo loo han-weyn yahay”!
Xigasho: Warsidaha AGA